MOETHIHAAUNG: ပညာသင်ဆု လျှောက်ထားနိုင်
ကနေဒါနိုင်ငံ ၊မဟာဓမ္မိကကျောင်းဆရာတော်များ (တိုရန်တို) ဗုဒ္ဓရံသီကျောင်းဆရာတော် (ဗန်ကူးဘား) တို့ နှင့် နိုင်ငံတကာမှ တပည့် ဒကာ/ဒကာများစုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားသော ကနေဒါစင်တာဖောင်ဒေးရှင်း"သည် နှစ်စဉ်ပညာသင်ဆုများထောက်ပံ့ပေးအပ်လျှက်ရှိရာ ယခုနှစ်တွင်လည်း (၂၀၁၇)ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင် ကျောင်းသားများ ပညာထူးချွန်ပြီး ဘဝအခြေအနေ မပြည့်စုံသည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအား ရွေးချယ်၍
ကျောင်းတက်နေစဉ်ကာလလစဉ်ပညာသင်ထောက်ပံ့ဆုများကို ကျောင်းပြီးသည်အထိ ပေးအပ်သွားမည် ဖြစ်ပါသဖြင့် ဖော်ပြပါအချက်အလက်များဖြင့် ကနေဒါစင်တာ ဖောင်ဒေးရှင်းသို့ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်
မိသားစုဓာတ်ပုံ အိမ်ရှေ့တွင်ရိုက်ရမည်၊ ကျောင်းသား ကိုယ်ပိုင်းတစ်ပုံ
၄။ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲ အမှတ်စာရင်းမိတ္တူ
- လျှေက်ထားသူသည် အထက်ပါ အချက်အလတ်များ ပြည့်စုံစေလျှက်
(၂၅-၁၀-၂၀၁၇)ရက်နေ့ထက် နောက်မကျစေဘဲ ပေးပို့လျှောက်ထားရမည်။
- သတ်မှတ်ရက်ထက် နောက်ကျမှ ရောက်လာသည့် လျှောက်လွှာများနှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခုမှ ပညာသင်ဆု လက်ခံထားပြီးသူများအား ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည် မဟုတ်ပါ။
- အရွေးချယ်ခံ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ၏ မေဂျာ(major)ဘာသာအပေါ် မူတည်၍ ထောက်ပံ့ဆုငွေ အနည်းအများကို စဉ်းစားပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
အရွေးခံ ကျောင်းသားများသည် နှစ်စဉ် ကနေဒါစင်တာဖောင်ဒေးရှင်း ဆုပေးပွဲသို့ ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျ တတ်ရောက် လာယူရမည်ဖြစ်သည်
အရွေးခံကျောင်းသားများအားအွန်လှိုင်းမှ ပြန်လည်အကြောင်း၍ ဖြစ်စေ အဖွဲ့ဝင်းများက လာရောက်တွေ့ဆုံ၍ဖြစ်စေ အရွေးခံကြောင်း ပြောကြားပေးပါမည်။
အရွေးမခံရသော ကျောင်းသာများ ပြန်လည်အကြောင်းမကြားပါ
The Canada Centre Foundation is an officially registered non-profit charity organization in Myanmar. The purpose of the foundation is to promote the health, education and living standards of the people in Myanmar, especially on the needs of Myanmar’s rural areas.
We receive funds from Members in Myanmar as well as from friends of Myanmar in abroad; we are able to accept charitable donations, public and private subsidies and legacies according to the law.
We invite you to join Canada Centre Foundation asamember both local and international expertise that can be targeted to meet the real needs of people in Myanmar
ဦးသိန်းဝင်း ( သနပ်ပင်) ဖုန်း ၀၉ ၃၃၀ ၂၈၈ ၉၈
မဝင်းဝင်းချို ( ရန်ကုန်)
ဒေါ်ဝင်းဝင်းချို တိုက် ၈ အခန်း ၅ ဦးဝိစာရအိမ်ယာ
ဒဂုံမြို့နယ် ရန်ကုန် မင်းမနိုင်အိမ်ယာ
Email/ facebook လျှောက်ထားလိုသူများအတွက်
facbook # https://www.facebook.com/canadacentremyanmar
6700 NO4Road, Richmond, BC
We build strong kids strong families and strong community
The information contained in this email message is privileged and confidential and is intended for the use of the individual or entity to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please notify the sender immediately by telephone or email and delete the message.
Posted by Myo Lwin Aung at 3:04 AM
(၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၅ ရက်နေ့ မော်လမြ...
ဒါလား အကြမ်းဘက်သမား ... ။
လမ်းဆိုးတွေကို ရှင်းလင်းတဲ့ သန်းစိုး ( ခ) သူရဲကောင...